Xa ndicofa kwiqhosha lokukhuphela akukho nto eyenzekayo, yintoni oyenzayo?
Ulinde kodwa akukho nto iyenzekayo, akukho fayile ekhutshwe, mhlawumbi emva kwemizuzu embalwa yokulinda ufumana umyalezo wephutha lohlobo "Isikhathi sokuxhuma" okanye "ERR_EMPTY_RESPONSE" okanye enye imilayezo ngokwe-browser yakho ye-intanethi.
Enyanisweni, ukulandwa kwi-Rikoooo ithunyelwa kwelinye iseva yangasese kwi-port 8888 (ex http://download.rikoooo.com:8888) oku kukuzinza okukhuselekileyo kokulandelwa ngakumbi kwiifayile zeGigabyte ezininzi.
Ingxaki kukuba i-firewall ye-router (i-Live Live, i-Freebox, i-Neufbox) yabasebenzisi abathile iqwalaselwe ukwenqaba ukukhutshwa kwe-8888 (kunye ne-8080 port), ukuba uyazi ukuba ulapha, Simviation.com kwaye ukhupha nayiphi na ifayile ngokungalindelekanga, ukuba ukukhuphela akuyi kuqali (njengeRiooooo), ngoko uphakathi kwala mancinci epesenti yabasebenzisi abaxhomekeke kwi-router port 8888 (kunye ne-8080 ye-Simviation). Ezi zibuko ziqhelekileyo zisetyenziselwa ukuboniswa kwewebhu, ukusakaza, kunye ne-HTTP, ngoko, kukhuselekile ukuvula.
Kufuneka uqhagamshele kwi-router yakho (ex Live Ibhokisi) kwaye wongeze umgaqo ovula i-8888 TCP / UDP port.
Nazi izixhumanisi kwamanye amanqaku ngesiNgesi achaza indlela yokuvula izibuko zakho, unganqikazi ukwenza uphando lwakho kwiGoogle usebenzisa igama lomnikezeli weenkonzo ze-intanethi njengegama elingundoqo.
Ikhonkco kwiividiyo ze-Youtube ezinezifundo ezininzi (engeza umnikezeli wakho wenkonzo ye-intanethi njengegama elingundoqo)
NgoMgqibelo Matshi 03 by rikoooo